NRN , महतो अनी गोङबु नयाँ बस पार्क
रक्तचन्दनको रातो दाम
अचेल देशमा NRN भन्ने संस्थाको च् हल पहल छ । कहिले marathoon त कहिले देव घाटमा व्रिद्धाश्रमको कुरो लाई लिएर, कहिले के हो bank त कहिले द्वेध नागरिकताको बिषयलाई लिएर । कहिले काही सोच्छु १४ लाख भन्दा बढी NRN छन भनेर द्वैध नागरिकता अनी सुबिधा को कुरा गर्ने, अब ति खाडीमा बस्ने, जो सँग नेपाली नागरिकता छदैछ, लाई कहाको नागरिकता दिन खोजेको हो कुरो बुझिएन ।
कसैले मलाई एक दिन फोनमा सोध्यो, "NRN को मीटिङमा तपाईं जानुभएन ?"
मैले भने “ म त के को NRN हो र ! Passport मेरो नेपाली छ, पढाई काम धाम सकिएपछी राजेश हमालको आफ्नै गाउ फर्की आए भन्ने गीतमा जस्तो झोला बोकेर देश फर्किनु पर्छ भने म त विशुद्ध नेपाली हो । बरु तपाईं कसरी NRN हुनु भो? बिहे गर्नु भो कि?”
उनले मलाई lecture दिए "ल तपाईंलाई थाहा छैन? छ महिना भन्दा बढी बिदेशमा बसे पछी NRN भई हालियो नि!"
मन मनै सोचे कस्तो बिडम्बना मान्छे हरु NRN कहलाउन कती लालायित रहेछन । मैले भने "अहिले सम्म म पूर्ण रुपमा नेपाली छु, कुनै दिन नेपाल नफर्किने बिचार र तेही अनुसार को ब्यवस्था भो भने भेटौँला नि त NRN को मीटिङमा । "
मलाई NRN संगठन गठन प्रती होइन कि कती छिटो मान्छे यो बिल्ला [Tag] लिन आतुर छन र म नेपाल बाहिर बस्छु भन्ने स्वतुस्टी लिन खोज्छन भन्ने प्रती अचम्म लाग्गेको थियो ।
NRN भनेको त Non Returning Nepali पो हो, हामी के को NRN ! एक जना मित्रले ब्यङ गर्थे बेला बेला मा। मेरो लागि NRN एउटा स्वभाविक अनी भावनात्मक संगठन हो जस्तो लाग्छ एउटा दुइटा ठुला अपबाद छाडेर ।
कुनै बेला देशलाई माया मार्न मन लाग्ने, अनी फेरी कुनै बेला त्यही देशको मायाले सताउने गजब को छ यो दुनियाँ , गजब को छ मान्छे को मन । तर "देर से आए दुरुस्त आए" भने झै यो पनि राम्रै पक्ष होला !
मैले यहाँ NRN को कुरा भन्दा पनि NRN जन्माउने, हाँक्ने, अनी सधैं हाँक्न खोज्ने "देशभक्त" "बिकास प्रेमी" सदाबहार अध्यक्षले नेपाल बिकासमा दिएको योगदान अनी भविश्यमा उहाले दिन सक्ने अझ ठुला योगदानको बारेमा एउटा देशलाई माया मार्न नसक्ने नागरिकको हिसाबले मात्र हेर्न खोजेको हो ।
सबैलाई थाहा छ Russian गणराज्यहरुमा अचेल माफियाको बोलबाला छ । त्यस्तो ठाउमा नेपाल सरकारलाई दिएको अर्थात भनौ नेपाल सरकारको छात्रव्रिती खाएर उतै बिजनेस empire खडा गर्न सफल भएका एक महा पुरुष छन नेपाली मुलका ।
देशमा पनि उनको ठुलो पहुच छ । राजाका ज्वाँईसँग मिलेर कारोबार गर्न टेलिफोन कम्पनी चलाऊन सक्छन, जल बिद्युत आयोजना चलाऊन सक्छन, media हाउस चलाऊन सक्छन, nursing home चलाऊन सक्छन , चलाइरहेकै छन । यि सबै हुँदा हुँदै पनि उन्लाई राजनीतिक पहुचबाट प्राप्त हुने कुनै कुरा पनि बाँकी राख्न मन लाग्दैन, अनी लिन्छन Japanese government ले नेपालको लागि उपहार स्वरुप बनाइ दिएको काठमाडौंको नयाँ बस पार्क ।
सबैलाई थाहा छ त्यो बस पार्क सुरुमा कती ब्यवस्थित थियो , toilet, parking lot, bus track आदी लामो समयको लागि हुने गरी बनाइएको थियो ।
तर जब Lhotse multipurpose कम्पनिको नामबाट गोङबुको नयाँ बस पार्क lease मा लिइयो तेस पछी सुरु भयो अब्यबस्था ।
green zone लाई भत्काएर पार्क गर्ने ठाउँ बन्यो, एउटा गाडी अहिले बस पार्क भित्र राखेको एक रातको २५० रु भन्दा बढी पर्छ। जस्ले गर्दा बसहरु बस पार्क नआएर जथाभावी ring road मा पार्क गर्न लागे, दुर्घटना र अब्यबस्था बढाउने कारक तत्वलाई प्रोत्साहन मिल्यो।
Track मा भट्टी राख्न दिने अनी सो बापत २५००० रु सम्म मासिक भाडा लिने , थर्मसमा चिया बेच्ने हरुले रु ३००० मासिक बुझौने अनी यात्री हिंड्ने ठाउँमा bench राखेर चिया बेच्ने, hucker हरुले पनि मासिक भाडा, गाडी धुने ग्रीज लाउने आदिले पनि मासिक भाडा बुझाउने प्रथा लागु भयो। यस्को प्रत्यक्ष मार सिधा बस पार्क उपभोग गर्ने यात्राु र देशको प्रतिस्ठामा पर्न गयो।
तपाईंहरुले केही बर्ष पहिले कान्तिपुर दैनिकमा त हेर्नु भयो होल पुरा पृष्‍ठ को रङीन बिग्यापन, बस पार्क कती बर्ष पछी यस्तो हुन्छ भनेर, अहिले हेर्नुस् कस्तो भएको छ । माफिया तन्त्रको पराकास्ठा तपाईं त्यहा केही समय बस्नु भयो भने देख्नु हुन्छ, लाग्छ, देशको शासन यहाँ चल्दैन ।
अझ रिङ्ग रोड देखी भित्र सम्म पुग्ने पूल बनाउने अनी प्रतेक भित्र जाने ब्यक्ती बाट bus park entry fee लिने भन्ने योजना थियो शायद पूलको निर्माण लागत बढी भएकोले उनिहरु अहिले त्यो बनाउने पट्टी लागेका छैनन ।
बिकास यवं बिनाश प्रती उहाको तेत्रो लगाब देख्दा अहिले किन खाडीमा बेल्चा बोकेर हिंड्ने गरीब कामदार हरुलाई NRN बनाइदै छ भन्ने कुरा जान्न गार्हो लागेन । किनकी अब नयाँ मोडेल को NRN Bank आउँदैछ, मुर्गा त चाहियो ! सुको इन्भेस्ट नगरदा त उहाको तेत्रो ठुलो काम चल्छ भने billion dollar भयो भने त देश नै नयाँ बस पार्क जस्तो बन्ला कि !
तर आशा गरौ Dr. Mahato बाट यस्तो काम फेरी हुने छैन वा त्यो पदमा देशको लागि केही गर्छु भन्ने मान्छे पुगुन र देशको लागि सकारत्मक योगदान दिउन।
yo Lhotse multipurpose company Mahato kai ho?
यो Lhotse Multipurpose Company उनै महतोको हो । तर यसका देखावटी अध्यक्ष गेहेन्द्र बहादुर कार्की छन भने हर्ताकर्ता महतोजीका नातेदार एमालेका रघुबिर महासेठ छन ।